उपभोग्य वस्तुको भण्डार पर्याप्तः सरकार « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, असोज १३ । नजिकिँदै गरेका दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहुने सरोकारवाला निकायहरूले बताएका छन् । अहिले बजारको आपूर्ति प्रणालीमा कुनै अवरोध नभएकाले खाद्यवस्तु दाल, चामल, चिनी, गेडागुडी, खानेतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यास सबैको उपलब्धतामा सहजता उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र नेपाल आयल निगमले काठमाडौंमा गरेको बजार अनुगमन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो दाबी गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश पाण्डेले चाडबाडको समयमा खपत बढ्ने भएकाले त्यही मौका छोप्दै केही मानिसले बजारमा विभिन्न खाद्यवस्तुलगायत एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने हल्ला फैलाउन सक्ने भएकाले उपभोक्तालाई सजग रहन आग्रह गरे ।
आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या नभएकाले बजारमा अहिले कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको अभाव नरहेको उनले दाबी गरे । बजारमा अहिले चिनीको अभाव हुनसक्ने भन्दै अनावश्यक हल्ला सुनिन थालेकाले त्यसमा विश्वास नगर्न सबै उपभोक्तालाई उनले आग्रह गरे । उनले भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई आधार मान्दै नेपालमा प्रत्येक वर्ष २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग रहेको बताए ।
विभागको तथ्यांकअनुुसार गतवर्ष नेपालमा २ लाख १२ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको थियो भने नेपाली उद्योगीहरूले १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेका थिए । आयात भएको र स्वदेशी उत्पादन जोड्दा ३ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन चिनी बजारमा उपलब्ध हुन्छ । त्यसैले यो तथ्यांकअनुसार चिनी अभाव हुन नसक्ने उनको विश्वास छ । बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
खाद्यान्नको पर्याप्तता त बजारमा छँदै छ, त्यस सँगसँगै खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको समेत पर्याप्त मौज्दात रहेको बताइएको छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले अहिले महामारीको प्रभावका कारण ठूलो मात्रामा ग्यासको खपत हुने ठूला होटेल, रेस्टुराँ र पार्टी प्यालेसहरू राम्ररी सञ्चालन नभएकाले ग्यासको खपत घटेकाले अभाव हुने सम्भावना निकै कम रहेको बताए । उनका अनुसार सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले बजारमा ग्यासको खपत करीब ३७ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
आधा भन्दा बढी अफगानीले तीव्र खाद्य अभावको सामना गर्नेछन् : संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी
८ कात्तिक : आउँदो जाडोयाममा २ करोड २० लाख भन्दा बढी अफगानहरु ‘तीव्र खाद्यान्न असुरक्षा’
डा. रामशरण महतको प्रश्नः चीनलाई खुसी पार्न नेपालको हित बिर्सेर एमसीसीको विरोध गर्ने ?
काठमाडौं, कात्तिक ८ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले राजनीतिक स्वार्थ, पूर्वाग्रह, भ्रम र
काठमाडौं, ७ कात्तिक । ऊर्जा उद्यमीले सरकारको लक्ष्य अनुसार नै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि
तिहारलक्षित बजार अनुगमनः ‘तत्काल कारबाही’ गरिने
काठमाडौं, कार्तिक ६ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रको बजारलाई एकीकृत अनुगमन गरिने भएको छ । बजार
काठमाडौं, कार्तिक ७ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीचको विवाद बढ्न थालेको छ । जसका
काठमाडौं, कार्तिक ६ । सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली ओली नेतत्व सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति धमाधम
म्याग्दी, कार्तिक ६ । म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका–२ मा पर्ने लमसुङ गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेको
मेरा पिकमा फसेका ५ आरोही तथा पदप्रदर्शकको उद्धार
सोलुखुम्बु, ५ कात्तिक । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए) ले सोलुखुम्बुको मेरा पिक (६,४७० मिटरं) आरोहण